Hubi adeegyada iyo barnaamijyada SIM-ka ah iPhone | War gadget
Sida loo helo barnaamijyada iyo adeegyada iPhone SIM
Khamri Dila | | Mobiles
Haddii taleefanka aad doorbideysaa uu yahay iPhone, markaa waa inaad fahamtaa inuu ku shaqeynayo kaar yar oo loo yaqaan SIM; waxay ku dhex jirtaa gudihiisa macluumaad cayiman oo guud ahaan tilmaamaya barnaamijyada ay ku rakiban yihiin warshaddu ama shirkadda taleefanka ee na siisay qalab la yiraahdo.
Taleefanka gacanta ee Android waxaa sidoo kale ka jira boos oo aan ka soo galno kaarkaan yar ee SIM-ka ah, oo leh shaqo la mid ah nooc kasta iyo madal kale oo aan ku yeelan karno daqiiqad la siiyo (iPhone ama Windows Phone iyo kuwo kale); si fiican, haddii aad u malaynayso in SIM-kan waxaa kaliya loo isticmaalaa si aan taleefan u sameysano xiriir kasta illaa iyo inta aan kaheleyno dheelitirka, aan kuu sheegno inaad saxsan tahay in kastoo hubaal aadan ogaan doonin, sidee tan uga sameyn kartaa gudaha SIM-gaan yar!
Warshadaha ku rakibay barnaamijyada iPhone SIM
Maqaalka maanta waxaan ku lafaguri doonnaa kaliya iPhone-ka, taas oo ah, waxa aan ka arki karno SIM-gan haddii aan dooneynay inaan wax yar ka baarinno waxa ku jira; guud ahaan waxaan dhihi karnaa taas kaarka yar waxaa jira meel bannaan oo ay ku yaalliin codsiyo kooban inay yihiin warshad lagu rakibay sida kor lagu soo sheegay; Codsiyadaani waxay awood u leeyihiin inay maareeyaan adeegyada kala duwan ee taleefanka gacantu uu leeyahay (xaaladdan, iPhone), oo soo jeedinaysa:
Isku dheelitirnaantii baa ba'day iyo tan aan weli haysanno.
Daqiiqadihii la hadlay.
Tirada fariimaha SMS ee la diray.
Waxay kuxirantahay wadaha taleefanka, macluumaadka waxay soo jeedin kartaa dhinacyo kale oo dhowr ah, in kastoo aan kor ku soo sheegnay ay yihiin kuwa ugu khuseeya magaca. Hada hadaad rabto gal si aad u hubiso waxa ku jira mid ka mid ah kaararka SIM-ka ah ka iPhone, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad raacdo talaabooyinka soo socda:
Sug nidaamka qalliinka inuu ku dhammeeyo socodsiinta.
Raadi oo xulo astaanta goobaha.
Daaqadda cusub ka dooro badhanka «lambarka taleefanka«.
Hadda waxaan u dhaqaaqeynaa qeybta ugu dambeysa ee daaqaddan.
Meel ku ogow inaad tagto ikhtiyaarka oranaya «Barnaamijyada SIM«.
Xulo xulashadan ka dibna dhagsii «menu«
Tallaabooyinka aan kor ku soo tilmaannay, dhawr ikhtiyaar ayaa ka soo muuqan doona oo aan baari karno; halkaas ayay joogaan soo bandhigno adeegyada kala duwan ee aan qandaraaska qaadanay, hababka biilasha iyo lacag bixinta iyo ikhtiyaarro kale oo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Sida loo helo barnaamijyada iyo adeegyada iPhone SIM
Waad salaaman tahay, ma arko ikhtiyaarka "Codsiyada SIM" ee macruufka 8.4. Ma ogtahay meesha ay hada marayso Sida laga soo xigtay Vodafone -Ono ayaa loo baahan yahay si loo kiciyo meertada terminalka. Waxaan hayaa iPghone 4S iyo 5S midkoodna ma muuqdo.
Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka. Dhunkasho.
Waad salaaman tahay, nooca cusub ee 12.1.2 ma jiro wax ikhtiyaar ah oo kale oo ah "taleefan" laakiin waxay tagtay xulashada "xogta gacanta"
Mahadsanid, xog aad ufiican.
Ma arko "barnaamijyada SIM" ee iPhone 6
Sideen ku heli karaa tan haddii aysan muuqan?
Ku jawaab Nella
Xulashada "Kaabta" waxaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo dhammaan macluumaadka ku jira taleefankayga sim?
Waxa igu dhacaya ayaa ah in aanan heli karin shaqooyinka Sim, tusaale ahaan: Waxaan aadaa dhanka bangiyada moobiilka oo sim ayaa ii muuqda, farriin baan dirayaa oo waxay igu leedahay sug oo waxba. Qofna wuu garanayaa sida loo hagaajiyo?
Jawaab Helena Hoyos
Sida loo kordhiyo xawaaraha isku-xirka Wi-Fi ee talooyinka wax ku oolka ah
Sida loogu raaxeysto Baraasiil 2014 meel kasta oo adduunka ah